Kyrgyzstan, sy ny Filoha Tsy Te ho Dragona · Global Voices teny Malagasy
Kyrgyzstan, sy ny Filoha Tsy Te ho Dragona
Voadika ny 05 Aogositra 2016 5:33 GMT
Dragona Mazika araka ny hita ao amin'ny lahatsary navoakan’i ThatIsSoDeck tao amin'ny Youtube.
Nanana valinteny maro ny dragona fahiny ho an'i Kyrgyzstan, firenena Aziatika Afovoany ny fitambaran'ny ravaka an-tendrombohitra mahavariana sy ny mpanao politika mahery fiteny ao no manome endrika azy ho fanjakana ao amin'ny angano zara raha nampahatsiahivina.
Saingy ahoana no naha-tafavoahan'ny tena fiainan'ny repoblika izay nantsoin'ny New York Times indray maka hoe Kyrbekistan hatramin'ny nanapariahan'izy ireo ny elany mihofakofaka?
Ho an'ny hafa, tia milaza ny fireharehany amin'ny tsy maha zavaboarin'angano azy mpamoaka afo ny filoha Almazbek Atambayev.
Tamin'ny fandraisana fitenenana nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety tamin'ny 1 Aogositra tao an-tanànan'i Cholpon-Ata no nitenenany hoe :
In order that a dragon with 120 heads not appear in the future, the constitution needs to be changed…If there will be a president different from me, then he can very easily change the constitution and become a dragon.
Mba tsy hipoiran'ny dragona manana loha 120 amin'ny hoavy, mila ovaina ny lalàmpanorenana…Raha hisy filoha samihafa amiko, afaka manova mora foana ny lalàmpanorenana izy ka ho lasa dragona.
Mba ialàna amin'ny fifangaroana, tahaka izao ny mitovy amin'ny filoha olombelona ao Kyrgyzstan:
Almazbek Atambayev, Filohan'i Kyrgyzstan (2011-hatramin'izao). Azo inoana fa ho tafala amin'ny toerany tsy ao anatin'ny revolisiona mihoso-drà mba hanerena azy hiala mialoha. Sarin'ny fitondrana Rosiana, azo ampiasain'ny rehetra.
Ary ireto filoha Kyrgyz ireto no “dragona” tondroin'i Atambayev hatrany:
Askar Akayev, Filohan'i Kyrgyzstan 1990-2005. Tafala tamin'ny toerana tao anatin'ny revolisiona milamina. Nalaina Nalaina tao amin'ny Yiv.narod.ru. Azo ampiasain'ny rehetra ny sary.
Filoha Kurmanbek Bakiyev (2005-2010). Voaongana tamin'ny revolisiona mahery vaika izay nahafatesana olona an-jatony. Sary Wikipedia.
Niseho efa ho dimy taona taorian'ny fanokanana azy ny fanamarihan'i Atambeyev raha niantso azy tamin'ny iray amin'ireo andinin-tsoratra fantatra voalohany momba ny dragona ilay mpanao lalàna kaonservativa – Tursunbai Bakir uulu — malaza ihany koa amin'ny fiteny hafahafa:
You were talking a lot about knights who defeated dragons, but later they all became dragons. The knights couldn’t resist the gold in the dragons’ dungeons. I sincerely don’t want you to become a new dragon in the history of Kyrgyzstan.
Niresaka betsaka momba ireo manamboninahitra miaramila nandresy ny dragona ianao, saingy lasa dragona avokoa izy ireo taty aoriana. Tsy nahavita manohitra ny volamena ao anatin'ny tranomandaavon'ny dragona ireo manamboninahitra miaramila. Amin-kitsim-po, tsy tiako ho lasa dragona vaovao eo amin'ny tantaran'i Kirghizistan ianao.
Raha mihevitra isika fa tafita amin'izany fitsapana izany i Atambayev ary tsy lasa dragona atahoran'ny olona sasany, tokony ho velom-pankasitrahana ve i Kyrgyzstan?
Amin'ny lafiny iray, eny. Nilaza imbetsaka i Atambayev fa handao ny toerany amin'ny faramparan'ny enin-taona monja amin'ny fe-potoam-piasany izay mifarana amin'ny taona 2017, ary raha niezaka naka ampahany goavana amin'ny toekarena ny taranaky ny teo alohany, nandoko endrika manintona ny zanany farany vavy.
Miròna amin'ny fihiràna mafy i Atambayev tenany, ka hamoaka rakikira amin'ny Septambra.
Etsy an-danin'izany, ankoatra ny valandresaka an-gazety miavaka sy feno resaka dragona, tsy nahavita nanatontosa zavatra manan-danja ho an'ny firenena mikorontana ara-toekarena ny taona maro niasany.
Mbola miely patrana ny kolikoly ary nihemotra nandritra ny fitondrany ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana maneho hevitra niseho taorian'ny revolisiona 2010 teo ambanin'ny teo alohany vonjimaika Roza Otunbayeva (filoha hafa tsy dragona).
Tsy manam-paharoa ny fahaizany miditra amin'ny valifaty imasom-bahoaka tsy mendrika na dia amin'ireo mpanohitra ara-politika iva indrindra sy ny fahefana goavana avy any ivelany, tsy mendrika ho an'ny filoha izany hoy ny filazan'ny mpitsikera.
Nanoratra valinteny mahery vaika ho an'ny filoha tao amin'ny Facebook ilay mpaneho hevitra liberaly malaza Daniar Aitman tamin'ny 2 Aogositra, nandritra ny valan-dresaka, nampitaha ny iray amin'ireo lahatsoratra – momba ny mety ho antony ao ambadiky ny fikasan'i Atambayev hanova ny lalàm-panorenana – amin'ny “fanitsahana maloto maimbo be”:
Tia milaza i Atambayev fa tsy dragona izy. Angamba, marina izy amin'izany. Mba hahalasa anao ho dragona, dia mila manana fahaiza-manao sasany ianao.
Tsy toetra ampy hahalasa anao ho filoham-pirenena maoderina ny tsy maha-dragona, na izany aza. Fa na ny mpangataka aza mety ho lasa filoha. Tamin'ny 2011, nila mpitarika te hampiray sy hitarika ny vahoaka amin'ny alalan'ny ohatra fitondran-tena ambony sy fomba fijery stratejika i Kyrgyzstan. Nila dika Kyrgyz mitovy amin'i Lee Kuan Yew [Singaparo], nahazo diplaoma tao Cambridge (oniversite) izahay, na dika Kyrgyz mitovy amin'i Saakashvili [Filohan'i Georgia teo aloha], nahazo diplaoma tao amin'ny oniversite Columbia. Ho solon'izany, nahazo lefitry ny filohan'ny komitim-paritra ara-politika sasany isika.
Tsia, tsy hoe mahery fiteny amin'i Atambayev aho. Ambony loatra ny sandan'ny fahaizany benahoana. Izay rehetra niaina na dia nandritra ny fotoana fohy tany amin'ny tontolo mandroso aza dia mahatakatra fa miasa manohitra an'i Kyrgyzstan ny fotoana.